Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Alaska Airlines waxay keensatay 12 diyaaradood oo cusub oo ah Boeing 737-9
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Ikhtiyaariyada loo adeegsado dhalmada 2023 iyo 2024 waxay sii xoojinayaan aragtida maaliyadeed iyo joogtaynta Alaska Airlines.
Shirkadda Alaska Airlines waxay dardar gelineysaa kobocdeeda maraakiibta.
Alaska Airlines waxay samaysay ikhtiyaar ikhtiyaar ah 12 diyaaradood oo Boeing 737-9 ah.
Diyaaradaha ikhtiyaariga ah ayaa hadda ah ballanqaadyo adag 2023 iyo 2024.
Shirkadda Alaska Airlines ayaa maanta ku dhawaaqday inay dardar gelineyso kobcinteeda maraakiibta iyadoo jimicsiga ikhtiyaariga u sameysay 12 diyaaradood oo Boeing 737-9 ah. Diyaaradda ikhtiyaariga ah ayaa hadda ah ballanqaadyo adag 2023 iyo 2024.
Alaska Airlines waxay ku dhawaaqday heshiis dib -u -habayn lagu sameeyay Boeing bishii Diseembar 2020 si loo helo 68 Diyaaradda Boeing 737-9 inta u dhaxaysa 2021 ilaa 2024, oo leh ikhtiyaarro 52 kale oo la gaarsiin doono inta u dhaxaysa 2023 iyo 2026. Sannadkan, diyaaradu waxay samaysay 25 ka mid ah xulashooyinka, oo ay ku jiraan 13 diyaaradood bishii Maajo. Iyada oo qayb ka ah macaamilkan, Alaska waxay ku dari doontaa 25 ikhtiyaar si ay dib ugu buuxiso kuwii la tababaray.
Nat Pieper, oo ah madaxweyne ku xigeenka sare ee maraakiibta, maaliyadda iyo xulafada Alaska Airlines ayaa yiri: "Waxaan ku faraxsannahay inaan dardargelinno koritaanka Alaska, annagoo ka dhiseyna aasaaskayaga maaliyadeed ee adag kaas oo noo saamaxay inaan ka gudubno masiibada." "Diyaaradahaani waa maalgashi caqli-gal ah, oo muddo dheer ku jira ganacsigeenna oo aan samayn karno annagoo isla mar ahaantaana ilaalinayna dheelitirka adag ee adag."
Gaarsiinta 2021 2022 2023 2024 WADARTA
Amarka Shirkadda asalka ah 12 31 13 12 68
Layli Xulasho May - - 9 4 13
Jimicsiga Xulashada Ogosto - - 10 2 12
WADARTA 12 31 32 18 93
“Boeing waxay sii ahaanaysaa lammaane aad u wanaagsan Alaska. Waxaan bilownay duulimaadkayagii ugu horreeyay 737-9s gugii la soo dhaafay, aad ayaana ugu faraxsanahay waxqabadka, dhaqaalaha iyo waxqabadka deegaanka ee diyaaradda, ”ayuu yiri Pieper. "Diyaaraduhu waxay dhaafayaan filashooyinkeenna - laga bilaabo sida aamusnaanta ay matoorada u ordaan illaa inta ay ka badan yihiin - martiduna way jecel yihiin."
Alaska's 737-9s waxaa loo qaabeeyey inay qaadaan 178 marti oo leh 16 kursi Heerka Koowaad iyo 24 kursi oo Heerka Sare ah, kuwaas oo bixiya qolka ugu qaalisan ee dayuuradaha kale ee Mareykanka.